UTrump, Q-Anon kanye 'nokuhlanza inganekwane' (uRobert Jensen, uJanet Ossebaard): UMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-25 March 2020	• 17 Amazwana
Yize uRobert Jensen ebukeka sengathi usephambukile emaqenjini ezepolitiki angena ngakwesokudla muva nje, usengumlandeli omkhulu weTrump. Amavidiyo wakhe okwamanje abukwa kakhulu, njengaleyo yenkanyezi entsha esenkabeni; intokazi ekholelwa kuma-UFOs nakwimibuthano yezilimo: Janet Ossebaard.
Lokho kuhle ngokwako ukukholelwa kuma-UFO noma imibuthano yezilimo, kodwa ngokuqondene nami ngiyalazi isu lokuxhuma abafuna iqiniso ne-kolder. Kodwa-ke, bobabili uJensen no-Ossebaard bakholelwa ukuthi uDonald Trump uzosindisa umhlaba. E-Ossebaard lokhu manje kuxhunyiwe ngokusobala endabeni ye-'deepstate' kanye ne-'Q Anon'. URobert Jensen uyakuthatha kancane ngobuhlakani, ngoba cishe uzama ukuthi angahlanganiswa naleya thethiyori yobumbano isikhathi eside ngangokunokwenzeka.
Ngizozama ukukuchazela ukuthi kungani ngikholwa ukuthi sibhekene nokuphepha kwe-pawns lapha. Angikwenzi lokho ukwenza abantu babe mnyama, kepha ngikwenza lokho okungenani ukuthi ngikunikeze umbono ohlukile ngalolu daba, ukuze ulufake ekucabangeni kwakho.
Ayini lawo mawaya okuphepha?
Ama-paw net usalama awabantu, abathi esikhundleni sebhulokhi efanayo yamandla esicabanga ukuthi singayibona ngemuva kwabezindaba, bagqame kakhulu kwezinye izindlela kwabezindaba futhi bahlangabezana nokuncane okungekho kwabezindaba kwabezindaba noma kwezokuxhumana. Bacindezela imidiya ehlukile kunenethiwekhi yabo. Iziteshi ezijwayelekile zibuye zibike ngabo (noma ngabe zimbi: okukunikeza ukunakwa kuyakhula). Ngaphezu kwalokho, kungenzeka basekelwa ngokuqinile yinombolo edingekayo IMBers nangabantu abamane bayiwe 'ngendaba enhle yomsindo', kwabezindaba zokuxhumana.
Ngemuva kuka-911, ngokwesibonelo, ubunomuntu onjalo e-US; umuntu oye waqongelela abalandeli abaningi ngokwethula imibono ehlukile yokufundwa okusemthethweni kwe-911. Akunandaba noma uyakholelwa yini ukuthi i-911 yayingumsebenzi ongaphakathi. Le Ace Baker ikwazile ukuthola ukulandela okukhulu kubantu ababekholelwa ukuthi i-911 yayingumsebenzi wangaphakathi. Wamboza zonke izinhlobo zemibono futhi washisa lezo ayecabanga ukuthi yizindaba ezimbi. Wayenjengokungathi, ubuso bokuthi 'ukunyakaza kweqiniso', njengoba kwabizwa kanjalo.
Lapho esethole ukulandela okukhulu, wenza into eyayingalindelwe muntu. Ngesikhathi kuqhubeka uhlelo lomsakazo, wavele wavele wavuma abazali bakhe, unkosikazi kanye nezingane wake wezwa kuqhuma isibhamu, kwabe sekuhamba ethule kwathi umsakazi wathi: "Ngiyathemba ukuthi lokhu akulona iqiniso." Kungekudala kamuva, kwafana u-Ace Baker ophile kakhulu futhi. Ngale ndlela waqhakambisa ukuthembeka 'kokunyakaza kweqiniso' ekuhambeni okukodwa. (lalela nansi isicucu)
Kodwa-ke, kunamasu amaningi amaningi, anjengalawo elinye igama elaziwayo 'ekunyakazweni kweqiniso' kamuva lavezwa njengomholi ngaphakathi kwehlelo 'Lezingane zikaNkulunkulu'; ihlelo elaliqhakambisa ubulili nezingane ezincane. Ngoba le Zen Gardner ikwazile ukuxhumana nabantu abaningi 'ekunyakazweni kweqiniso', bonke labo bantu batheleleka.
Ama-pawns amaningi okuphepha asetshenziswa izinsizakalo ikakhulukazi ukumemezela iqiniso elicacile noma iqiniso elibonakalayo. Ngoba badonswa yonke indawo, bathola abalandeli abaningi. Sibona okufanayo ngoRobert Jensen noJanet Ossebaard. Inhloso yesikhathi eside ukuthi njengoba besesikebheni sokudoba bangahudula abantu abaningi ngangokunokwenzeka enetheni labo lokuphepha, bese beshaya isikebhe sokudoba ngenhlamba. Lokhu kuqinisekisa ukuthi ungabahlazisa labo bantu abagxekayo futhi ubagcine kusuka manje kuqhubeke ukuhambisana nabezindaba nabazepolitiki abahamba phambili.
Ukuhlanza okujulileyo ne-Q Anon
Bobabili uRobert Jensen noJanet Ossebaard balindele okukhulu kuDonald Trump. Ugobe lwe-Q Anon lususelwa kothile obeka imiyalezo ebethelwe kwi-inthanethi, ekhuluma ngesizinda esijulile ukuthi uTrump wayefuna ukushiya kanye noDonald Trump olwa nalesosikhala esijulile. Kunamahlebezi okuthi u-Q Anon uluhlobo lohlelo lwe-AI futhi ngiphakamise nokuthi leyo ndlela ezinhlokweni ezedlule.
IBM's Deep Blue supercomputer inqobile ekuqaleni konyaka we-1996 wompetha womhlaba uKasparov nge-chess neKhompiyutha ye-Alum ye-Google ngo-2016 iqhawe lomhlaba lomdlalo oyinkimbinkimbi kakhulu Iya ukuyishaya. Ngakho-ke kunengqondo ukuthi ohulumeni basebenzise ama-computer amakhulu kusu lawo ngokuhlangana nabezindaba kanye neminye imithombo yezindaba, kuhlangene nayo yonke imininingwane enkulu yabantu (abaqoqayo ngesikhathi sangempela).
Kepha ake sikuyeke lokho maphakathi. Ngokomthetho, singasho ukuthi ohulumeni bayazi ukuthi kunokuphikiswa ngaso sonke isikhathi kubantu. Ngakho-ke uma bekwakha lokho kuphikiswa uqobo futhi babambe izixuku ezinkulu zabantu, bazokwenza kahle. U-Anon angaba nje yingxenye yalelo qhinga lokuphepha.
Isibonelo semibono ye-Q Anon engiyitholile izolo. Konke kubonakala kungokwesiprofetho, ngakho-ke kunikeza umbono wokuthi uQ usebenzisana ngempela noTrump. Ngabe bangakwazi kanjani konke lokhu? Vele ufunde:
Isango: UDkt Russell McGregor
Ukwahlulelwa kwendlu yomhlaba kuzoqhubeka kuze kuphele konke ngo-Ephreli 10 (uLwesihlanu oluhle). Ngaphambi kwalapho, izinsuku eziyi-10 “zobumnyama” zizoqala ekuseni ngo-Ephreli 1, futhi lezo zinsuku zizophela futhi ngo-Ephreli 10.
Masinyane nje ngaphambi kokuqala 'kobumnyama', uPOTUS uzothumela i-Tweet nge: Abantu baseMelika engikanye nabo ... iSiphepho siphezu kwethu ......... "(" Abantu bakithi baseMelika ... ISiphepho sesifikile ...) "Uhlobo lwe-'April 1 'intando ekuqaleni inciphise ukukhathazeka ngokubukeka "kobumnyama." Lapho "ubumnyama" buqhamuka, kuzoba nesidina ukwethuka okuzungeze iCoronavirus kanye nesimo esiphuthumayo sezempilo emhlabeni jikelele. Lesi simo esiphuthumayo sezokwelashwa sizobe simenyezelwe ngaphambi kuka-Ephreli 1 emadolobheni amaningi (nakwamanye amazwe. IVert.).
Abantu abaningi bayozibeka ngaphansi kokuboshwa kwendlu futhi iningi lakha ukudla, njll.
E-Australia, abangasebenzi nabathathe umhlalaphansi bazothola ama- $ 31 ngoMashi 750. Amanye amazwe nawo azokwenza amalungiselelo anjalo ukuze bambalwa abazokufa yindlala. Ezinye izitolo eziphuthumayo zizohlala zivulekile ukuze zithengise izinto ezidingeka kakhulu, kepha izitolo eziningi zizovalwa.
Ngezinsuku eziyi-10 'zobumnyama', azikho imithombo yezokuxhumana noma i-intanethi etholakalayo. Kuzoba nogesi, kepha awukho umsakazo ne-TV. Awekho amaphephandaba azophrintwa. Amabutho ezwe ngalinye azovala laba bamemezeli.
IPOTUS izoba nendlela YOKUTHOLAKALA yokufinyelela kubantu emhlabeni wonke ngezinsuku eziyi-10 'zobumnyama' futhi lokho kuzoba ngoHlelo Olusakazwayo Olusheshayo. Wonke amabutho emhlabeni wonke azodlulisela lokho kuma-TV nakwamadivayisi emazweni awo.
IPOTUS izoba ngezinsuku "zobumnyama", noma ngabe phesheya, noma kwi-Airforce One. Isizathu okuthiwa siso esisebenzisa i-Airforce One sizoba ukuphepha kanye / noma ubungozi bokutheleleka. Uhlelo Olusakazwayo Olusakazwayo luzosakazwa kusuka ku-Airforce One. Ngakho-ke kuzoba nokuvinjwa kwezindaba okusebenzayo, ngaphandle kwePOTUS.
Imibhalo eyenziwe ngokweqiniso izosakazwa emhlabeni wonke kuma-TV nakwamanye amadivaysi ngoHlelo Olusha Lokusakaza. Okuqukethwe kuyo kuzochaza konke ukwesabeka, ubugebengu nemininingwane yakho konke. Okuqukethwe kuzoba nobungani bomndeni futhi kuzoba ngokungangabazeki.
UPOTUS uzochaza ukuthi wacelwa kanjani amasosha aseMelika ukuthi aqoqe i-Deep State nokuthi akayena “usopoliti”. Uzoqinisekisa imininingwane ye-Q. Le mibhalo izoveza ukuvuma okurekhodiwe kusuka kosopolitiki abadumile be-Deep State kanye nabantu abakhethekile. Isimo sokulawulwa komhlaba siyochazwa. Kuzokwethulwa ubufakazi bobugebengu. Izitatimende zenkantolo yezempi zizokwaziswa emphakathini.
Lezi zethulo zizosakazwa, kusho amahora angama-8 ngosuku, phakathi nezinsuku eziyi-10 ezigcwele. Ukuphindaphinda kuzokwenzeka usuku lonke ukuze labo abasasebenza nabanakekeli baphuthelwe. Ukusakazwa ngakho-ke kuzoqhubeka amahora angama-24 ngosuku. Imindeni ngeke ize yenze lutho ngaphandle kokubuka lezi. Amavidiyo amabi kakhulu anobufakazi ngeke abe wonke umuntu, angabukwa yilabo abafuna ngemuva kwezinsuku eziyi-10 'zobumnyama' kwi-Intanethi.
Kuzoba nokuzamazama okukhulu, ukwethuka nokudideka. Indima yethu njengabantu abathanda ukushisekela izwe lethu kuzoba ukuhlinzeka ngokuthula, ukuvuma, ububele nokuqinisekiswa. Abantu abaningi abashisekela izwe ababekade besaba kakhulu ukukhuluma bazoyenza.
Akunakwenzeka, kodwa kungenzeka, ukuthi uJFK Jr nabanye bazofaka isandla ekuthembekeni kokuhlinzwa. Lapho izinsuku eziyi-10 zobumnyama “kuLwesihlanu oluhle ziqeda, kuzoba nokuqhuma okukhulu kwengokomoya.
NgoLwesihlanu Olungile, isintu sizotshelwa ukuthi leli gciwane seliphephile futhi umuntu angaphuma futhi abuyele ndawonye. Kuzogcwala amasonto, amasinagoge nama-mosque. Kuzoba nokuhlupheka okuningi, kepha futhi nokukhululeka.
Amaphesenti amancane, mhlawumbe ama-5%, azobe engasebenzi futhi efundiswe kude kakhulu ukwamukela iqiniso. Njengokujwayelekile, kuzodala ukuphazamiseka.
Izwe Elikhulu Lizohluleka ukuphatha yonke into unomphela. Amasosha azoqapha iziteshi ze-TV nabashicileli bamaphephandaba ukuvikela ukonakaliswa. Ngemuva kokuvalwa, abezindaba abasunguliwe bazodalulwa ngokuphelele futhi ngeke bakwazi ukuyiphikisa le ndaba.
Abantu be-Deep State abangazange banikezele futhi abadingiswanga eGuantanamo Bay bazonikezela ngempelasonto yokuzibulala ka-Ephreli 11-12, 2020. Abantu abangathembekile bazovunyelwa ukuzivikela ngokumelene nesixuku esinolwazi.
Manje lokhu okungenhla kuhambelana kahle futhi nengqungquthela yezindaba izolo yeDoald Trump ememezela ukuthi ufuna abaseMelika bakwazi ukuhambisa ngokukhululeka baphinde baye esontweni ngesikhathi sePhasika (bona businessinsider.com). Ngakho-ke udaba lwe-Q Anon lubukeka luhambisana kahle nomthungo kulokho okushiwo nguTrump, okwenza kube nokukholeka ngokwengeziwe. Akekho owabona ukuthi izinsiza zihlakaniphe ngokwanele ukuthi zingadlala womabili amakamu.
Manje yini inkinga ngoRobert Jensen
Ngeke ungizwe ngithi kukhona okungahambi kahle ngoRobert Jensen njengomuntu. Ngicabanga ukuthi ukhonza njengethoyizi lokuphepha futhi njengongumxhumanisi wokuxhumana owazi kahle ukuthi wazigcwalisa kanjani inethi yezokuphepha. Isu lakhe akukabi manje ukumemezela obala i-Q Anon theory. Kodwa-ke, usevele wancoma uDonald Trump kuvidiyo yakhe yokugcina kuTrump ethi isixazululo akufanele sibe sibi kakhulu kunenkinga.
UJensen ugcizelela ukuthi izindlela zokuvalwa kwe-coronavirus ziyidrama kakhulu futhi abaningi bazovuma naye. Ugxile emazingeni okufa kanye nobudlelwano nokuthopha kwezwe lonke, kubandakanya nemiphumela yezomnotho. Uthola futhi lokhu Bloomberg idokhumenti, engivele ngiyixhumanisa nendatshana edlule. Kuchaza ukuthi ama-99% abantu abashona e-Italy asevele enazo ezinye izimo abangafa ngazo.
Manje uzothi:Kahle kanti? Yini engalungile ngalokho? Unembile impela ke !?“Ngichazile ngenhla ukuthi amanetha okuphepha awasho amanga. Bangakuvezela ngisho neqiniso eliphelele. Inhloso yamanetha okuphepha ukuthi uxhunyaniswe nomzimba othile womcabango noma umuntu. Lowo muntu kuleli cala nguDonald Trump.
Uma kamuva kuvela ukuthi uDonald Trump akahlanzi ngokuphelele ekujuleni kwenhliziyo futhi uma kamuva kuvela ukuthi umhlaba uzokhala ngokuthi uDonald Trump, ngokwesibonelo, wenze iphutha elikhulu ngokushiya amaMelika emgwaqweni futhi ngempelasonto yePhasika (ngoba uma, ngokwesibonelo, ubhubhane lwe-coronavirus luphinde luvela, kodwa bese kuba nobudlova obukhulu), khona-ke abasekeli bakaDonald Trump kanye noJensen bashaywe endaweni eyodwa eyawa. Ngemuva kwalokho wonke umuntu uzobiza ukuboshwa kwabo bonke labo bantu abangabazi ababenqaba ukubona ukuthi liyingozi kangakanani leli gciwane le-corona.
Uyacelwa ukuthi uqaphele: abezindaba nabo bangakusabalalisa lokho kuqubuka kabusha okungenzeka, kepha ngaleso sikhathi ngeke usakhululeka ukuthi ucabangisise ngecebo lokuphepha kanye nokuqhamuka kwenethiwekhi yokudoba kaRobert Jensen. Eqinisweni, 'ukucabanga okubucayi' yisimo esiyingozi kakhulu ngokwengqondo ngaleso sikhathi.
Yini engalungile ngoJanet Ossebaard
Kufanele kucace ukuthi angikaze ngihlasele abantu, njengoba bengineminyaka engaphezu kwengu-7 ngenza. Angithandi 'ngaphansi kwebhande'. Ngiyaxwayisa ngecebo okufanele libhekwe. Iqiniso lokuthi kunabantu abangase basebenzele ngasese izinkonzo futhi bazivumele ukuthi badluliselwe phezulu njenge-net net, ngunembeza wethu ne-karma ukucubungula.
KuJanet, kuyacaca ukuthi umemezela imibono ye-Q Anon kumavidiyo akhe. Ngakho-ke empeleni ukukhuthaza ukuthi uhlale emuva ulinde ubone ukuthi kwenzekani. Ukutakulwa kukaTrump kuthiwa kuseduze. Sengibhale ngalokho wathi en wathi indatshana.
Yini esingayenza-ke Kuhle kholwa, yini elungile?
Ukucabanga ngqo lokho kungumphumela otholakala lapho uthola ukudumazeka lapho ubanjwa enetheni lokuphepha futhi umkhumbi wonke ushonile. Kungakho ngilokhu ngiveza ukuthi kumayelana nokwazi kwakho. Futhi lokho ngomunye umqondo lapho uRobert Jensen ehlala khona lelo gama ekusakazweni kwakhe kwakamuva.
Konke mayelana 'nokwazi' kwakho ngomqondo 'wemvelaphi yokuba khona kwakho'
Encwadini yami ngikhuluma ngokuqwashisa ngeqiniso futhi ngikhuluma ngegciwane elihlanganisa konke okufuna ukusenza sibambe ongezansi. Ngaphinde ngabikezela ngomqedazwe kulokhu, njengoba sibhekene nakho manje. Okubaluleke kakhulu, kodwa-ke, ngichaza ukuthi asikwazi ukufeza okuningi ngokomzimba. Ngabe ucabanga ukuthi uma bonke abalimi beya emigwaqweni noma sonke silala phansi masse, singashintsha okuthile? Umbuso usezikhombisile ukuthi ungawuvala wonke umnotho ungabathinti.
Esingakwazi nokukwenza okumele sikwenze kudlula okulindelwe ngabokufika abakhonza kithi; lidlula ithemba lokuthi uQ Anon noTrump bazosisiza. Esingakwenza kukhulu kakhulu! Esingakwazi ukukwenza mayelana nokuqaphela amandla akho okudala endalo. Ngiyakuchaza lokho encwadini. Ungathenga lokho. Ungayifunda mahhala kumibhalo eminingi, kepha ngoba usekhaya nokuthi unesikhathi sokufunda; ngoba ungathola amandla akho eqiniso; ngoba singakunqoba ukwesaba futhi ngoba sinekhono kakhulu kunalokho esikucabangayo: ngakho-ke ithuba lokufunda lesi sifinyezo:
Qaphela: Ngiye ngigxekwa kaningi ezinsukwini zakamuva ngifuna ukuthengiswa kwebhuku ukwenza imali. Le ncwadi yabhalwa ngesicelo sabafundi ukuze baqoqe izihloko (zamahhala zokufunda) kusuka eminyakeni yamuva entweni engafundwa ngosuku olulodwa.
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: i-trreadreaderapp.com, businessinsider.com, bloomberg.com
Amathegi: Anon, ekujuleni kwenhliziyo, afakiwe, Janet, Jensen, hlanza, U-Ox unentshebe, Q, Robert, trump, inetha lokuphepha, ukuphepha kwenetha lokuphepha
25 March 2020 ku-19: 30
Kubukeka kungenakwenzeka ukuthi uJensen uzothuthukisa uMongameli waseBrazil uJair Bolsonaro ekusakazweni kwakhe kusihlwa
Qaphela ukuthi lokhu kuyingxenye yecebo lamakamu amabili nemigomo yokuphepha. Ngakho-ke: abaphikisi be-coronavirus noma labo abathi konke kuzolunga maduze bazojeziswa kanzima ngenxa yokuvuselelwa kwegciwane (okungenani lokho kuzobonisa abezindaba nezepolitiki kanzima ngokusebenzisa izibalo). Ngemuva kwalokho bonke "abagxeki" bavuswe. Cabanga ngamakamu okufunda kabusha, izigwebo zasejele, njll.
UTrump noBolsonaro bayingxenye yalowo mdlalo. Ukugxila kukaTrump ngemuva kwe-Easter kubonakala kuyindlela enengqondo yokulindela.
25 March 2020 ku-22: 25
Bheka nje ukusakazwa kweJensen futhi ukubona kwami ​​phambili kwaba yiqiniso… (35:25 imizuzu.)
28 March 2020 ku-11: 51
NjengoTrump, uBolsenaro manje usezibeka ngokwakhe njengo “populist omubi futhi omubi ngokwedlule. Kulula ukuyiqonda kalula uma usubonile ukuthi konke kusebenza kanjani.
UJensen manje ubuye futhi ulandisa ukulandisa okuhlukile okuthe xaxa mayelana nepolitiki ye-NL. Abezepolitiki badukisiwe futhi badukiswa yimithombo yezindaba ephezulu, ngoba abezindaba banamandla amakhulu. (uma ungakwenzi esikushoyo futhi singakwazi ukwenza ama-wilders kube phambili).
Ngakho-ke ngokusho kukaJensen thina (abaphapheme) kufanele sikwenze kucace kosopolitiki ukuthi kufanele bashintshe, ngakho-ke konke kuzolunga.
25 March 2020 ku-20: 01
Uqinisile ukuthi bahlanganisa amaqiniso.
Nginesiqiniseko sokuthi konke kwenzeka ezingeni elingokomoya njengamanje. Abantu abaningi bakuphuthelwa lokhu ngenxa yazo zonke iziphazamiso. Lapho usuvele ukhululekile emsebenzini, sisangena phakathi kwe-netflix, ingcindezi kanye namagciwane.
Zivimbe, ungasuse, ukhahle, ukhiphe amandla bese uya ezingeni eliphakeme.
25 March 2020 ku-20: 38
Yikho konke ngesinye isikhathi ukudikibala ngokuphelele. Ngaphandle kwePrince Charles yaseNgilandi manje nayo ine-corona (ngiyifisela kungekudala lol).
Inani labantu abaziwayo abane-corona kufanele cishe libe yi-1 kwabangu-50. Kepha abantu bathola lokhu kujwayelekile impela ngoba baphonswa ekufeni kwabezindaba ngezibalo (ungalokothi wepesenti lamaqondo !!!) ngokwesibonelo senani labantu emhlabeni jikelele (ngokuya nge-MSM) okubonakala sengathi banakho. Lokhu kulinganiselwa ku-400.000 ngokwe-MSM
I-98% yabantu ababona lesi sibalo abayazi ukuthi kusho ukuthini nhlobo. Uma abantu abangama-400.000 emhlabeni jikelele bane-corona lokhu kusho ukuthi cishe abantu abayi-1 kwabangu-17.000 emhlabeni empeleni bane-corona !!!
Ngomfowethu kanye nabanye abambalwa futhi abaphapheme ngenjabulo, ngenza ucwaningo oluncane phakathi kwabantu abacishe babe yi-100 lobuhlakani obuphakathi obujwayelekile, ngibabuza, phakathi kwezinye izinto:
Inani eliphelele lokutheleleka kwe-corona emhlabeni lingama-400.000. Yiliphi iphesenti labantu emhlabeni?
Impendulo evamile kwaba (uyakholelwa noma cha) ukuthi abantu abangama-400.000 babephakathi kwe-1% ngisho ne-10% yabantu bomhlaba. 2 kuphela kwabangu-100 abanikeze impendulo efanele.
Lokhu kusho ukuthi lapho umDashi ojwayelekile (futhi mhlawumbe nabantu bakwamanye amazwe) bezwa noma bebona inani le-400.000 yezifo zamakhorali ezibhalwe emhlabeni wonke, ucabanga ukuthi leli liphesenti elikhulu kakhulu labantu emhlabeni (wow vele u-1% noma I-5% yabantu bezwe ine-corona, yingozi kangakanani).
Ngikubonile nalokhu okuvela kuJair Bolserano. Into ehlekisayo ukuthi uPutin uvunyelwe ukukhuthaza ngqo umbono ophambene neRussia: UPutin uthi kuyingozi kakhulu nokuthi amaRussia kumele alandele izinkomba zikaBig Brother ngqo nokuthi umuntu kufanele alalelisise (uPutin usho okufanayo noRutte)
Kungani cishe wonke umhlaba ulele? Kubonakala sengathi babedalwe ama-Luciferian elite. Ngokuqinisekile umuntu kufanele akwazi ukucabanga kancane futhi abale ukuthi cishe akekho umuntu emhlabeni one-corona? (ngaphandle kwabantu abadumile, cishe wonke umuntu ubonakala ene-corona).
25 March 2020 ku-21: 32
Njengoba wazi kufanele "ulalele ochwepheshe" 😉
Noma kunjalo ... izinombolo ziyizinombolo ngoba abezindaba nezepolitiki basitshela lezo zinombolo. Trumanshow? Awazi.
Esikwaziyo ukuthi abantu bathatha isikhundla sokuthi ekukhuleni okubonakalayo ubona izinombolo ezincane ekuqaleni kuze kube yilapho ijika ligquma njengomcibisholo.
Akusizi ngalutho ukugxila kubantu ezinambeni noma kumaphesenti noma kuma-curve.
Kuyasiza ukugxila kubantu kwangempela njengoba sikubona.
26 March 2020 ku-02: 51
engike ngakwazi / ngafunda ebangeni lami “lemfundo” yobudlelwano bomphakathi be-PR ukuthi izibalo - noma izibalo njengoba zabizwa kahle - ziyithuluzi elifanele (izindlela) zokusakaza ngalo. Ubudlelwano bomphakathi = ukudlala / ukuphotha izithameli. Ngezinombolo "unganciphisa" sonke isimo / isimo / umuntu ngamunye ekukhulunyweni esondweni. Ngokwesilinganiso, ususa inani lomuntu. Izindlela ziyindlela yokwenza i-numb. Ubuchwepheshe banamuhla busebenzisa kuphela amadijithi ama-2 - i-zero noyodwa ukudala iqiniso elingathandeki. Ukwakha ukumbondela.
Akusikho-ke ukuthi sithi ngesibalo abasenza sibe nesiyezi. Ngamanye amagama, ulahlekelwe yisimo sakho. Uma ulahlekelwe, uzolahlekelwa okuthile, okungumongo / uhlaka.
Uma ungenalo uhlaka / umongo, ungachaza ithoyizi esandleni somunye umuntu.
Izinombolo ziyizimpawu, indlela esezingeni eliphansi lokuxhumana (nomqondo ongaziwa). Zonke lezi zibalo empeleni azinalutho, azisho lutho, kodwa ngasikhathi sinye zitshela yonke into kubahambi. Manje sesifikile ngesikhathi lapho kungumsebenzi wethu ukudingida le ndaba (isipingi, izinongo).
Qhathanisa nezinombolo zamagama esiNgisi ezitshela okungaphezu kokusolwa kokuqala (inani lobuso) umsolwa. Ukukala kukhubazekile. Izinombolo / izinombolo ziyisibonakaliso sokwenza imizwa (= imizwa ephansi) kusebenze ngaphandle (ngokungazi) ukuqaphela ukuthi uma ungeyena umsunguli. Uhlelo lwemfundo lwenzelwe lokho ngqo. Izinombolo / izinombolo zilethwa kithi ngendlela eyodwa kuphela, ifomu elingenalutho. Kungakho kufanele ukuthi "sifunde ukubala" ukuze sinqamule ulwazi lwendawo yonke. Nokho, leyo ngenye indaba ejulile. Siyethemba ukuthi uzovuma kulokhu futhi ucabangisise ngakho.
26 March 2020 ku-07: 04
Isibonelo, ukufaka umuntu ngaphansi kwengxoxo ye-hypnosis (yingakho abantu bethanda ukubukela i-TV noma isiteshi se-YouTube), kungcono ukubala izibalo ezimbalwa zilandelana. Lokhu kunomphumela wokudida izinqubo zakho zokucabanga ozazi. Bazama, kunjengokungathi, ukulandela amanani amakhulu noma izibalo, kepha ngoba ingqondo yakho inenkinga "yokugcina", isikhulumi sidlula ukungazi kwakho futhi singakwazi ukubeka ingqondo yakho engaphansi ngokubeka izikhonkwane.
I-Master communicator (noma uchwepheshe we-NLP) URobert Jensen naye uyasebenza kule ndlela.
Uyabona futhi kuningi kubantu abanjengoJeroben Pauw. Unamasu amaningi ku-NLP kanye ne-hypnosis yengxoxo, kepha izibalo nezinombolo zisebenza kahle kakhulu.
Yingakho uhlala unesimo sezulu esisekupheleni kwengqungquthela. Ngemuva kwalokho uzobona izinombolo futhi uzophonswa emuva naphambili ebalazweni. Uzoba ngaphezulu kumephu (hypnotized).
25 March 2020 ku-20: 58
Ukuphela kwamaza omkhuhlane!
Kuza igagasi elilandelayo!
25 March 2020 ku-23: 38
ngakho-ke uma ngibona kahle, ngemuva kwamaviki ayi-11 ngonyaka ka-2020 sinesibalo esiphansi sokufa kunokuba ulayini wesisekelo?
26 March 2020 ku-07: 37
"Ngabe uthola kanjani ukuthi ngingumuntu ophikisayo ophikisayo uFreeland? Ngihlala ekhaya elihamba nendlwana futhi ngizokukhombisa i-akhawunti yami yasebhange. ” Kulungile Janet, ngikhombise i-akhawunti yakho yasebhange bese ungikhombisa leyo enye i-akhawunti yasebhange.
"Ukube bengingifonele nje, ngabe ngikulungisile"
Futhi uhlu u-Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers) uhlangana ngaphansi kwalesi sikhundla ngokuhlukumezeka okujwayelekile ukushisa iVrijland (njengoba enza njalo kubhulogi nakuyo yonke imithombo yezokuxhumana; lokho kungumsebenzi wawo).
Vele uJanet uguqule amavidiyo akhe ngenxa yokugxekwa kwami. Ukube "ngimbize nje", ubengathatha nje amavidiyo ama-3 aqhakazile we-Q Anon okungaxhunyiwe ku-inthanethi futhi enze amasha futhi avumelanise yonke indaba yakhe. Yebo Janet, kunjalo? Kolder Yebo. Kubhekwe kahle, kulungiselelwe kahle futhi ukukhushulwa kwe-Q Anon kwethulwa ngesikhathi esifanele.
29 March 2020 ku-16: 04
Inombolo ye-akhawunti yasebhange kaNkk. Martin ibanikela ngomuntu ofuna ukunikela. Ff ukuhlangana okungathi sína ??? I-NL33RABO03 ……… ..3 nayo iyinombolo yokugcina. Zimbalwa izinombolo ezenziwa ngasese, yize azikhiphela yena uqobo. Kepha yisho.
30 March 2020 ku-00: 07
Izimpendulo ze-Zero kanye nezibukeli ezi- + / 17.000, kungenzeka kanjani ku-YT
futhi kumele sisho inani elihle lemizuzu engu-6 3, noma u-666
ngiyabonga Janet, grey ibrashi Janet.
Ngempela emzuzwini 4; 23 uthi, Ngisatshiswe unyaka unyaka ngenxa yesiyingi sezitshalo, uJanet Ossebaard umlandeli wezilokotho, ngempela uJanet, shayela uMartin manje
31 March 2020 ku-08: 35
Hahaha ... ooh ooh ooh ... indoda yomuntu indoda ... kufanele ukuthi i-IQ iphakeme kangakanani ukuthatha lolu hlobo lwezibalo ngokungathi sína.
"Ingelosi yakho esemhlabeni" nayo ikhuluma ngaye ..
Kufanele bafundise abadlali be-clown kungcono ukugwema ukufaka umbhalo. Ukuwa kwe-kabal ..
Uba kanjani yilungu le-IMB? Ukushintshana nesigwebo esincishisiwe? Ngabe sezisohlelweni olusha lwebhange lwezezimali oluzothatha indawo yakudala? I-Inoffizieller Mitarbeiters (IMB'ers): benza sengathi bayayikhipha ngabantu, kepha empeleni bangabathengisi abakhulu kunabo bonke; amalungu e-NSB wanamuhla? Unama-IMBers okutshela ukuthi uhlale ezindlini futhi uqaphe imithombo yezokuxhumana yendaba yezwe esemthethweni futhi une-IMBers ekutshela ukuthi u-Q Anon noTrump bahlanza i-cabal.
31 March 2020 ku-08: 36
Oh yebo kanye neLange IMB'er Frans nayo ingadlala lo mdlalo
Peter Steegmans wabhala:
2 April 2020 ku-19: 53
Ngithanda ukuzwa ukuthi ucabangani ngoDavid Icke? Ingabe futhi lokhu kuyimbangela yokumbulwa kokuphikiswa okulawulwayo? Kakhulu udalula okufanayo noJanet Ossebaard.
Uma kunjalo, ungathanda ukusazisa ngokuthi ungaqiniseka kanjani nge-100% ngalokho?
Nami ngizibuze lo mbuzo olandelayo, uma udalula i-pedophilia kulokho kujula, njenge-Ossebaard (imuvi yomfana enqunu ophunyuka esigodlweni ephethe ishadi ngewindi) noDavid Icke, owenza lutho ngaphandle kwalowo ukuxhuma okunye bese udweba isithombe esikhulu. Akunabo ingozi yokuthi umane weqe umgomo wakho? Ngemuva kwakho konke, ufuna ukukhipha ababukeli abathile bese ubeka kamuva njengoba ukungazinzi engqondweni. Ongakufuni njengenhlangano yobugebengu ukuthi imisebenzi ecashile ofuna kakhulu ukuyigcina ebumnyameni izomane yenze umphakathi ngokusebenzisa ukuphikiswa okulawulwayo. Ngoba, empeleni i-David Icke yenze imininingwane eminingi yomphakathi eminyakeni engama-20 eyedlule, okungaphezu kwalokho i-jan ejwayelekile enesigqoko okwakungacabanga ukuthi kwakungamcabango wobumbano. Kungani ungaya ngokujulile njenge-mitarbeiter? Kungani ungagxili nje kulokhu okubamba iso lomphakathi nge-media media njll, ngaphandle kokuyekethisa konke okunye. Akunangqondo ...
2 April 2020 ku-23: 09
UJanet Ossebaard empeleni akafana neze noDavid Icke, ngaphezu kwalokho uvele afunde indaba. I-Icke ingekhalori elihlukile ngokuhlukile. UJanet Ossebaard uthengisa nje indaba ye-Q Anon, akukho okuncane. Lokho kuqhamuka ngqo efektri ephikisayo yeReuters-efana.
Ungakhombisa iqiniso eliningi. Eqinisweni, kuyingxenye yeKaballism ukukhombisa abantu ububi. "Ekuvukeni 'kwanamuhla kokubi nokuhle kumele kubonakale komunye nomunye enkazimulweni egcwele. Ukuthi "ukuvusa" ngaphandle kokudalula okushiwo (kepha kukhanyisela kuphela ububi bokubi) kungokwokwenzakala okungamanga "ekuvukeni" kwendlela yeCaliferian cabalistic. Ngakho-ke lokho kungukuvuka kwamanga. Kubalulekile ukuthi sifunde ukuthola lowo mehluko. Ukuqaqa ububi obumsulwa nobokuphela emhlabeni ngakho-ke kuyingxenye yokuvuka endleleni yeKabbalistic ebheke kuLuciferi.
Manje angizifundanga izincwadi ezimbalwa zokugcina ze-Icke, ngakho angazi ukuthi ukhuluma ngo-uthingo kanye noLucifa, kodwa uma umuntu engakhulumi ngomakhi walesi simiso se-virus (lesi simulation virus), sigxile nje kulokho ukuvusa lokho kuyadingeka ukuze kuhlanganiswe ne-Luciferian AI (ngohlelo lwegciwane; ubunye bamanga) esikhundleni sokuvuka komthombo wethu wangempela - umongo wangempela wokuthi singobani - futhi sinqamule kulokho kwaLuciferian uhlelo lwegciwane oluzama ukuduna indawo yonke yasekuqaleni ngokuzama ukuxhuma ukwazi kwethu (ngobunye bamanga futhi ngaleyo ndlela ngendlela yeKaballah lapho ububi kumele buvele futhi).
Ngamafuphi: ukuletha ukukhanya okumsulwa nokuphela kokukhanya kuyingxenye yendlela yeKabbalistic yokuhlangana nohlelo lwegciwane leLuciferian (ubunye bamanga).
Into esemqoka ukuthi sibona lonke uhlelo futhi lokho kusho ukuthi kufanele siqaphele uhlelo lwegciwane leLuciferian futhi sithole ukuthi thina ngokwethu siphethe imininingwane yasekuqaleni yesitokisi. Lokhu okugcina ngakho-ke kuqukethe “indlela yokuphuma”.
Ukuqonda okwengeziwe ngibhekisisa incwadi yami nezinye izindatshana ezengeziwe:
Mhlawumbe sekuyisikhathi sokunikela i-athikili eyengeziwe kuyo
« Ukuvuselela ukuvala i-Coronavirus covid-19: Uma uvuka futhi uqaphela ukuthi ubanjwe, yini ongayenza?
IMeya yase-Italy isabisa ukuthumela ama-firethrowers ukuyolwa ne-coronavirus »
Ukuvakashelwa okuphelele: 1.349.122